Budata Cube Roll APK maka Android
Budata Cube Roll
Free Budata maka Android (44.00 MB)
Budata Cube Roll,
Cube Roll bụ mmepụta siri ike dị ka egwuregwu Ketchapp, nke anyị na-enweta ọtụtụ egwuregwu nka. Negwuregwu ebe anyị na-agbalị iduzi cube nelu ikpo okwu nke na-agagharị dịka ọganihu anyị si dị, a chọrọ itinye uche na ndidi yana nkà.
Anyị na-agbalị ịkwalite cube nelu ikpo okwu na obere aka na egwuregwu nka nke m chere na e mere ka ọ bụrụ na ekwentị gam akporo. Nezie, e tinyewo ụdị ọnyà dị iche iche iji gbochie anyị ịga nihu ngwa ngwa. Ihe mgbochi ndị anyị na-aga na-adaba mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ụzọ ahụ na-efunahụ, cubes si nakụkụ nke ọzọ, na-egbochi ụzọ mgbapụ na ọtụtụ ihe mgbochi ndị ọzọ ejiri nlezianya debe ka anyị ghara ịbawanye akara anyị.
Na egwuregwu ebe anyị kwesịrị iche echiche ma mee ngwa ngwa, ọ ga-ezuru imetụ ebe anyị chọrọ ka ọ gaa na-eduzi cube. Noge a, enwere m ike ịsị na egwuregwu ahụ na-adị mfe igwu egwu ọbụna nebe ndị na-adịghị mma maka egwuregwu egwuregwu dị ka ụgbọ ala njem ọha.
Cube Roll Ụdịdị
Nha faịlụ: 44.00 MB
Mmepụta: Appsolute Games LLC